SAWIRRO: Gabar iibinaysa TAAJKII arooskeeda kaddib markii uu caruuskii ka raacay…. | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SAWIRRO: Gabar iibinaysa TAAJKII arooskeeda kaddib markii uu caruuskii ka raacay….
SAWIRRO: Gabar iibinaysa TAAJKII arooskeeda kaddib markii uu caruuskii ka raacay….
(London) 11 Luulyo 2019 – Caruusad laga dal doorsaday ayaa daboolka ka qaadday in ay iibinayso taajkii lagu aroosi lahaa kaddib markii uu caruuskii aroosi lahaa uu ka raacay gabadhii arooskooda qorshaynaysay.
Donna Bettiss, 28 jir, oo ah reer Horsham, West Sussex ayaa laga tegey iyadoo murugo la ooyaysa kaddib markii uu James Routledge, 30 jir, uu ka dal doorsaday jeer ay todobaadyo yari ka hareen arooskooda oo dhici lahaa 2018, sida haatan la kashifay.
James ayaa kaaga darane gabadha xaaskiisa noqon lahayd ka aadey Paige Hannington, 27 jir, taasoo ahayd gabar lamanahaa kala haadey ka caawinaysay dhanka qaban qaabada iyo agaasinka arooskooda.
Miss Bettiss ayaa sheegtay inay haatan £1,800 oo gini oo ah lacag ka badan 2,000 oo doollar ku iibinayso taajkii arooskooda si ay uga takhalusto wax ay ku sheegtay ”xusuus xun” iyadoo sheegtay inay weliba sii muraara-dillaacday markii ay ka war heshay in haweenayda ninkeedii ka dul qaadday ay tahay Ms Hannington – oo weliba ahayd naag la qabo markii ay xiriirka isaga la bilaabaysey.
Bettiss ayaa xitaa dharkan isku tijaabisey iyadoo la joogtey gabadha ninkii aroosi lahaa haatan ka duufsatay.
Mr Routledge iyo gabadha duufsatay ee Ms Hannington
Previous articleXaaska Nainggolan oo laga helay cudur halis ah (Farriin dhiillaysan)
Next articleSHAKI WAYN: Maxaa keenay in war ka bilowday baraha bulshada Soomaalida ay la booddo saxaafadda Kenya (Tuhun jira)